Guddoomiyaha Aqalka Sare Cabdi Xaashi “Waxaanu ogaanaynaa tabashada Juballand (dhegayso) – Radio Daljir
Guddoomiyaha Aqalka Sare Cabdi Xaashi “Waxaanu ogaanaynaa tabashada Juballand (dhegayso)
Diseembar 8, 2018 8:51 b 0
Guddoomiyaha baarlamaanka Jubaland Cabdi Xaashi ayaa ammaan usoo jeediyay hormarka amni ee kajira magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose, isagoona sheegay tabashada Jubbaland ee dowladda faderaalka inay u joogaan magaalada Kismaayo.
“Waxaan ku faraxsannahay nabad-galyada taallada Kismaayo, shirkii halkaan ka dhacay wixii kasoo baxay waxaan go’aansanay inaan ogaanno bal maxaa jira oo tabashadu tahay oo dowlad goboleedyadu ay tabanayaan oo jira” ayuu yiri guddoomiyaha.
Cabdi Xaashi ayaa Kismaayo kula kulmay madaxda Jubaland, waxaana maamulka Jubaland uu ka mid yahay dowlad goboleedyada khilaafka uu kala dhaxeeyo dowladda faderaalka Soomaaliya.
Golaha Aqalka Sare ayaa waday dhexdhexaadin ay ku doonayaan inay kusoo afjaraan muranka labada dhinac, waxaana dhowaan uu soo saaray Aqalka Sare go’aamo kusaabsan wada shaqaynta labada dhinac iyo in laga heshiiyo khilaafaadka ka dhaxeeya oo u badan tabashada deeqaha caalamiga ee Soomaaliya.
Madaxda wadamada Jabuuti iyo Suudaan oo gaaray Itoobiya